avy amin'ny admin tamin'ny 05-07-21
Ny fiakaran'ny fikarakarana ny biby
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 28-06-21
Ankehitriny, ny ankamaroan'ny olona dia mitazona ny biby fiompy ho toy ny fianakaviana sy namana, koa ny fomba fanatsarana azy io dia lasa fanontaniana ho an'ireo olona ireo. Ny fisian'ny fikolokoloana biby dia manome fahafaham-po fotsiny ny fiheverana hatsaran-tarehy ho an'ny biby fiompy manokana. Na izany aza, ny fikolokoloana biby dia mihoatra ny fandroana fotsiny sy ...
Ny alika dia manao zavatra hafa ankoatry ny volon-dohany
"Ny alika dia manao zavatra hafa ankoatry ny volon-dohany." Omaly, ny lakolosy fotsy fotsy an'ny Missics Valley handoa hatsaran-tarehy 130 yuan, noho ny alikany manety ilay maodely vaovao. Raha ny filazan'i miss Chung, ny alikan'ny fianakaviany amin'ny fahavaratra telo volana, mandro, miharatra, manala kely nai ...
Fikolokoloana sy fanitsiana hety isan'andro
Raha mbola mila diovina ny hety aorian'ny fampiasana azy, dia azo fafana amin'ny landihazo mpitroka, lamba hety, sns, mba hahafahana mamerina haingana ny haran'ilay hety. Ny fampiasana hety mandritra ny fotoana lava dia hiteraka hafanana be ny hety, hampihena ny hamafiny, ...